MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 897
>Burmese in SF Bay showed their solidarity with DASSK
သန်းဝင်းလှိုင် - မြန်မာနိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးဘုရင် သီပေါမင်းတရားကြီး - အပိုင်း(၂)
>9th Feb 2010 - Burmese Journals Headlines Digest
>Khin Pan Hnin supports Saw Wai
> စာရေးဆရာမ ခင်ပန်နှင်း ကဗျာဆရာစောဝေဘက်မှ သက်သေထွက်ဆို ဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ကဗျာဆရာစောဝေဘက်မှ သက်သေလိုက်ပေးနေသော စာရေးဆရာမ ခင်ပန်နှင်း (ဒေါက်တာဒေါ်ခင်မြင့်ဦး)။မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်သောကြောင့် တရားရုံးတက်ပြီး သက်သေလိုက်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၉ လက...
>White Rainbow – Burmese Poetry Festival 2006 Part One
> ဇာဂနာ၊ စောဝေ၊ ဇော်သက်ထွေးနဲ့ အောင်ဝေး ပြီးတော့ ၂၀၀၆ အဖြူရောင် သက်တံ အမှတ်တရ အပိုင်း ၁ မိုးမခ ရုပ်သံ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ အဖြူရောင် သက်တံ...
>Oct 22, 2008 – MoeMaKa Radio
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် လက်မှတ်ရောင်းစနစ်သစ်ကြောင့် မီးရထားစီး ခရီးသည်များ ဒုက္ခရောက်၊ ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို နှစ်ပတ်လည်အလှူ၊ လန်ဒန်ဂီတပွဲမှ လပွတ္တာရွာကလေးသို့ ဒါန...
>Win Pe Bag – 4
> ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၄မြို့မငြိမ်းရဲ့လူသိနည်းတဲ့သီချင်းတပုဒ်ဝင်းဖေအောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျားကျနော်က မန္တလေးသားဆိုတော့ မန္တလေးသားမြို့မငြိမ်း၊ ဦးလေးငြိမ်းအကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောမဆုံးပေါင် တော်သုံးတောင် ဆိုတာလို အများကြီး ပြောစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သောတရှင်တွေ ငြီးငွေ့မသွားဖို့ကလည်း...
>Ko Myo Art – Remembering Artist Wa Thone
> Ko Myo Art – Remembering Artist Wa ThoneOctober 22, 2008 No tags for this post. Related posts No...
> နေပြည်တော်ရဲ့ ပိတောက်မြေရေဒီယိုက လေလှိုင်းနဲ့ တိုက်ပြီ ညွန့်ထွေး အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ နံနက်ခင်း မင်္ဂလာအချိန်ခါ သတင်းသံသာအဖြစ် ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အာရ်အက်ဖ်အေနဲ့ ဒီဗွီဘီတို့ အားပေးသူ မြန်မာပရိသတ်အပေါင်းခင်ဗျာ နေပြည်တော်က...
>Maung Yit – From Burma with Love
> ဆရာတော်တပါးနဲ့ စကားလက်ဆုံ (မေတ္တာ၊ ဧည့်လာဖို့ နဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း …) မောင်ရစ် အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ အစကတော့ မြန်မာပြည်က ခေတ္တလာရောက်တဲ့ ဆရာတော်တပါးက စာအုပ်စာတမ်းတချို့ ဖတ်ချင်တာတွေရှိလို့ ရှာဖွေပေးမိတာပါ။...
>Maung Phi La’s poem 01
> ‘လိုင်း’ (၂) အခန်း (၈) ကုတင်ပေါ်မှလူနာမောင်ဖီလာအောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဟိုးတုန်းကတော့ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ မီးတောက်မီးလျှံအခု မြောင်းကြိုမြောင်းကြားကလျှံထွက်တိုးတက်လာတဲ့ရေပုတ်ရေဆွေးအခု ငါ့ခန္ဓာကိုဖျက်ပြီးတခြားအသက်ထဲ ထည့်ကြည့်စမ်းငါလဲပြိုပြီအမှတ်နဲ့ ငါ့ကျောကိုလာလာသပ်နေတယ်ငါမောပြီအထင်နဲ့ ငါ့ခရီးကို ဖျက်စီးနေတယ်ငါ့အသီးအနှံတွေကြွေကျသွားအောင်လေထဲမှာ ‘ဆူး’တွေထည့်ပြီး တိုက်တိုက်နေတယ်၁၂ နာရီနဲ့...
>The Sugar King – Worshipers of Poop in Burma – Last Part
> ချီးတုံးကို ကိုးကွယ်သူများ – နောက်ဆက်တွဲ အရှုပ်အထွေးများ သကြားမင်း အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ချီးတုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအမြင်များ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ချီးတုံးကို ကိုးကွယ်လိုက်ကြတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတွေပေါ်မှာလည်း ချီးတုံးက လွှမ်းမိုးလာပါတယ်။...
>Kyi Mwae Eain’s short story 01
> ဆင်ခြေဖုံးဆက်တင်ကြည်မွေ့အိမ်အောက်တိုဘာ ၂၁ အိမ်မွေးဘဲငန်းတစ်အုပ်၏ ဂူးဂူးဂဲဂဲ အော်မြည်သံကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လှစွာ အိပ်ယာမှ နိုးထခဲ့ရသော နံနက်ခင်းပေါင်းများစွာကို သူမ ပိုင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပါသည်။ မကျေမနပ် ဖြစ်ရတတ်သော်လည်း ဘယ်သူ့ဘယ်သူကို အပြစ်ရှာလက်ညှိုးထိုး၍ ရမယ်ရှာရမည် မသိတတ်နိုင်သောကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်...
> ၀ိတ်လည်းကျ ၀မ်းလည်းဝမိုင်မြစ်ကြီးနားအောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ “ – – အလုပ် စ၀င်တုန်းက ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၆၅ ပေါင် ရှိတယ်၊ အခု ၁၄၀ ပေါင်ပဲရှိတယ်၊ ပေါင်...
> မဟာဗျူဟာရှုထောင့်လား အကြောက်တရား အဂတိလားသန်းစိုးလှိုင်အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မကြာမီ လပိုင်းအတွင်းက မော်ဒန်ဂျာနယ်မှာ မောင်စူးစမ်းက လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည် “မှတပါး အခြားရွေးစရာလမ်းမရှိသည့် နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း” အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့ကျသည့်နိုင်ငံရေး...
>Po Jan – News on the roand inarush – 21st Oct 2008
> လမ်းပေါ်က အပြေးအလွှား သတင်းများ ဖိုးဂျံ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ကမ္ဘာစီးပွားပျက်ကပ်ကို မြန်မာငွေစက္ကူအသစ်များနှင့် ဖြတ်ကျော်မည် စာဖြန့်ဝေသူ ကျောင်းသားလူငယ်များကို စစ်အစိုးရ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က လိုက်ဖမ်း အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် လျှပ်စစ် ထရန်စဖော်မာ...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 12
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 12 October 18th 2008(Buy Stuff...
>Aung Din – Poem
> နှုတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း – ၁ အောင်ဒင် အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ရှည်လျားလွန်းတဲ့ည အိပ်မက်တွေများလှတယ် …။ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေရဲ့ အကွာအဝေးး တဟုန်ထိုးပြေးနေတဲ့ ရထားတစ်စင်း ဘဝဆိုတာ …ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်...
>The Sugar King – Worshipers of Poop in Burma
> ချီးတုံးကို ကိုးကွယ်သူများ သကြားမင်း အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈ သကြားမင်းကြီးလည်း ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းတွေနဲ့ အလုပ်များနေတာကြောင့်မြန်မာပြည်ဖက်ကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပြီ။ “မြန်မာပြည်မှာ ပေါတာကြီးသန်းရွှေ အလွန်ဆိုး၊ ဆုံးမဖို့လို”ဟု မာတလိက အီးမေးလ်ပို့ထားသည်။ သကြားမင်းကြီးရဲ့...
>unlawfully detained Burmese reporter freed by Burmese regime
> (Burmese news journals and periodicals selling on streets of Rangoon, file photo, MoeMaKa) အပြစ်မရှိဘဲ အဖမ်းခံထားရသည့် သတင်းထောက် အချုပ်မှလွှတ် မိုးမခ...
>မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – Oct 19th 2008
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ အောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဂီတ အမွေ ဆက်ခံစေ – ဦးပန်တျာ (ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည် အလွမ်းပြေ) သတင်းပဒေသာ ခွက်စောင်းခုတ်...
>Khaing Myae Kyaw Zwa’s poem 01
> တောအုပ်ခိုင်မြဲကျော်စွာအောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈ မျက်နှာကိုမိုးစက်တွေ အသေအလဲ ပက်နေတာတောင်ပျင်းရိဘယ်လိုမှော်လဲခြေအိတ်ထဲအဆွေးငါးတစ်ကောင်အရိုးများရှိနေမလား။ ကိုယ့်ဘက်ကရှုမျှော်ခင်းဆိုတာမမြင်ရမြင်ရတဲ့လမ်းများအားလုံး လမျက်နှာပြင်လိုချိုင့်ခွက်နဲ့။တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်ရှိနေသေးကြောင်းချောင်းတဟန့်ဟန့် ညာမပြောနိုင်တော့ဘူးမျှော်လင့်ချက်အဖတ်လိုက်ကိုယ်အရေပြားရောဂါလိုကွာကျတယ်။ ထားလက်စတရားနဲ့တီထွင်ပြီးသားဒုက္ခများခိုးလိုးခုလုခုတ်မောင်းတော့မယ့်ရထားလေးကိုယ့်ဘဝပိတ်ကားပေါ်မေးတင်စေချင်တုန်းပဲ။ အဝေးပြေးလက်မှတ်တစ်စောင်မှာ အဖျားတက်ကြည့်နေဆဲ မှန်ချပ်ဟာ အရှိန်နဲ့ကျကွဲတော့မလိုဒီလိုကျက်စားမိပါရဲ့။ ။ No tags...
>Patriotic Dee Doke U Ba Cho
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၁)ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၏ မျိုးချစ်စိတ် နှင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်များထိန်လင်းအောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေဟာ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းတွေပေါ်မှာ လိုက်ပြီး ရှင်သန်နေရတာကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေ ဖြစ်တာနဲ့အမျှ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလည်း...
>lucky editor andacouple’s spilit
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစများကံကောင်းတဲ့အယ်ဒီတာနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တဲ့အခါအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ကံကောင်းတဲ့အယ်ဒီတာမနေ့တုန်းက ကြေးမုံသတင်းစာမှာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ မင်းတြားကြီးသန်းရွှေနဲ့ သံအမတ်၂ယောက် တွေ့ဆုံခြင်းသတင်း မျက်နှာဖုံးပြည့်ပါလာပါတယ်။ သံအမတ်တွေနဲ့တဲ့ဟေ့၊ မျက်နှာဖုံးပြည့်ဆိုပါလား၊ ထူးခြားသဟ ထင်ပြီး သွားဖတ်ရင်လည်း ဖတ်ပေါ့။...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၄၉)ရုပ်သေးသဘင် နှင့် ရွှေပြည်ကြီးသီချင်းမာမာအေးအောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း(၁၂)အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ‘ပဲဟင်းကို ရှုပ်ချင်သည်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးကို၊ အနုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့။ မှိုနှင့်မျှစ်ကို နုတ်ချင်သည်၊ ကျဉ်တုတ်ခံဝံ မခံဝံ’ ကျည်းကန်ရှင်ကြီးနန္ဒဓဇရဲ့ မေတ္တာစာ တပိုဒ်ကို သတိရမိတဲ့အချိန်မှာပဲ...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 11
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 11 October 18th 2008(Save the...
>Golden Triangle Part 02
> အဆိပ်အတောက် ရွှေတြိဂံ ရှင်းတမ်း တရုတ် စာနယ်ဇင်းသမားများ ရေးသည်။ ဖြူစင် ဘာသာပြန်သည်။ အခန်းဆက် ဘာသာပြန် မှတ်တမ်း – ၂ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈ အပိုင်း (၁)...
> မိုးမခသို့ပေးစာများ၊ အပိုင်း ၂၀ ပို၍ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများသို့ အောင်ဒင် အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈ – ၁ – သမီးလေးရေ ….. အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကြီးက နီးသထက် နီးလာပြီ …. ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ...
>Ottara Moon – Home Coming, Amigo …
> အာမီဂို(Amigo) ရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီး ဥတ္တရမွန်း အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈ စီးပွားရေးကျဆင်းလို့ အမေရိကန် လေကြောင်းကုပ္မဏီများဟာ လေယာဉ်ပေါ် အစားအသောက်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကို လျော့ချနေချိန်မှာ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများကို အဓိကပြေးဆွဲနေတဲ့ လေယာဉ်လိုင်းတစ်ခုဟာ သားရေထိုင်ခုံ၊...
>Remembering Masoeyein Sayadaw U Kovida (Sasana Moli)
> Remembering Masoeyein Sayadaw U Kovida (Sasana Moli) Part 2, Talk with Burmese Community at SF Bay (15th Dec...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 10
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 10 October 17th 2008 (Do...
>Than Soe Hlaing – media in Burma
> ဖွံ့ဖြိုးလာနေတဲ့ မြန်မာသတင်း မီဒီယာ လောကသန်းစိုးလှိုင်အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈ “သတင်းရေးသူတွေဟာ ပြင်ပမီဒီယာနဲ့ ဆက်သွယ်တာဟာ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလည်း မဟုတ်သလို အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းသမားရဲ့ သဘာဝအတိုင်း တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ စိစစ်ရေး...
Page 897 of 947«1...895896897898899...947»